“Hazard waa Michael Jordan-ka kubadda cagta wuxuuna ku guuleysan doonaa Ballon d’Or” – Gool FM
(Madrid) 06 Dis 2019. Eden Hazard oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay ciyaartooyda ugu fiican adduunka, ayaa yimid Real Madrid suuqii xagaaga ee la soo dhaafay kaddib markii uu kaga soo dhaqaaqay kooxda reer London ee Chelsea.
Macalinka xulka qaranka Belgium ee Roberto Martínez ayaa taageera weyn u muujiyay xiddiga kooxda Real Madrid ee Eden Hazard, kaasoo xilli ciyaareedkiisa ugu horreeya ku qaadanaya garoonka Santiago Bernabéu, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay Michael Jordan-ka kubadda cagta.
Haddaba Roberto Martínez oo ka qeyb galay barnaamij ka socday Radio Cadena SER ayaa wax laga weydiiyay arrimo ku saabsan Eden Hazard wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleynayaa in Eden Hazard uu ku guuleysan doono abaal-marinta Ballon d’Or, waxa uu sameynayo waxay ka dhigeysaa inuu yeesho qaab ciyaareedka ciyaartoyda u sharaxan inay ku guuleystaan Ballon d’Or, mar walbana wuu u qalmaa inuu ku guuleysto abaal-marintan”.
“Wuxuu waxyaabo badan ka qabtay Chelsea iyo inta uu ku sugnaa Faransiiska, way adagtahay in la helo ciyaaryahan ajnabi ah oo saldhig u noqon kara kooxda kuna guuleysan kara horyaalka, wuxuu u shabahaa Michael Jordan, waa Michael Jordan-ka kubadda cagta”.
Si kastaba ha noqotee, Eden Hazard oo dhaawac lugta ah ka soo gaaray kulankii PSG ay ku wada ciyaareen tartanka Champions League ayaa seegi doona ciyaarta la wada sugayo ee El Clásico oo ay kooxda Barcelona wada ciyaari doonaan 18-ka bishan Disembar.